Booqashda Wafdigii dowladda ay ku tageen xuduuda iyo wixii ay ku soo arkeen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Booqashda Wafdigii dowladda ay ku tageen xuduuda iyo wixii ay ku soo arkeen
19th November 2015 MAREEG Af Soomaali 0
Wafdiga ayaa u kuur galayey xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaannada ay cabashooyin ka soo gudbiyeen shacabka degga n ee magaalooyinka Beled-Xaawo iyo Doolow ee gobolka Gedo oo la xiriirta arrimaha xuduudka Soomaaliya iyo Kenya.
Guddiga ayaa sheegay inuusan jirin derbi laga dhisay xuduudda, isla markaana aysan soo arkin caalamad xuduudeed la beddelay.
Sidoo kale Guddigan waxay sheegeen inay arkeen in la qoday god qiyaastii dhan 1.6 mitir oo dhinaca Kenya ku yaalla oo u jira 6 mitir calaamadda xuduudda, iyadoo dherarka godkaasi dhan yahay illaa 700 oo mitir, iyo in duleedka magaalada Beled-Xaawo ay ku arkeen waddo la xaaray oo cago-cagaf la mariyey.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa wafdiga oo la hadlay VOA ayaa sheegay in dhulka aysan cidna lahayn ee Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeeya ay ka jiraan dhaq dhaqaaqyo tuhun abuuri kara.